मध्यपहाडी लोकमार्गको पर्वत खण्डमा निर्माण तीव्र – Sourya Online
सौर्य अनलाइन २०७७ मंसिर ७ गते १२:२१ मा प्रकाशित
पर्वत । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गको पर्वत खण्डमा निर्माण तीव्रगतिमा अघि बढेको छ । गएको चैतको दोस्रो सातादेखि रोकिएको निर्माणकार्य असोजको दोस्रो सातादेखि सुरु भएको थियो । पर्वत खण्डको निर्माणको जिम्मा लिएको लामा कन्स्ट्रक्शन कम्पनीले निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ ।
गएको भदौ महिनामा निर्माणकार्यको म्याद सकिएको भए पनि निर्माण व्यवसायीहरुलाई कोभिडका कारण थप ६ महिना स्वतः म्याद थपिएपछि निर्माण पनि तीव्रगतिमा अघि बढेको हो । पर्वत खण्डमा अहिलेसम्म ६० प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिएको मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना कार्यालय पर्वतका प्रमुख मेघराज मरासिनीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले निर्माणको गति तीव्र छ ।
यही अनुसार काम भएमा आगामी असारभित्र सबै काम सम्पन्न हुने देखिएको छ । लकडाउनलगायतका कारणले ६ महिनाभन्दा बढी रोकिएको काम तीव्ररूपमा अघि बढेको निर्माण कम्पनी लामा कन्स्ट्रक्शनका प्रोजेक्ट म्यानेजर गोविन्द भुसालले जानकारी दिए । उनका अनुसार केही भागमा कालोपत्रसमेत भइसकेको छ । निर्माण कम्पनीका अनुसार आयोजनाको पर्वतको प्रवेशद्वारबाट
मालढुङ्गासम्मको २३ दशमलव ७६९ किलोमिटर स्तरोन्नतिका लागि कम्पनीले ८३ करोड ९८ लाखमा रुपैयाँमा ठेक्का लिएको हो । पर्वत खण्डको २३ किलोमिटरमध्ये स्ट्रक्चरको काम ९५ प्रतिशत सकिएको छ । बागलुङको सिमाना मालढुङ्गाबाट नयाँपुलसम्म करिब पाँच किलोमिटर कालोपत्र भइसके पनि वर्षायाममा ठाउँठाउँमा पहिरो गएकाले पुनः कालोपत्र गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ ।
कोभिडपछि निर्माण व्यवसायीले असारसम्मको म्याद मागेका कारण पनि समयमै कालोपत्रको काम सक्ने उनको विश्वास छ । ‘अब व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्न थप जनशक्ति र स्रोत साधनसहित काम अघि बढेको छ’, उनले भने, ‘अब राम्रोसँग काम अघि बढ्छ, तोकिएकै समयमा काम पूरा हुन्छ ।’
यसैबीच राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. पुष्पराज कँडेल, प्रधानमन्त्रीका विकास तथा पूर्वाधारविज्ञ सल्लाहकार गजेन्द्र थपलिया, राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिवद्वय डा. वासुदेव शर्मा र किशोर जोशीलगायतको टोलीले निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्गको कास्की, पर्वत र बागलुङ खण्डको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेर फर्किएको छ ।
सो टोलीले पनि निर्माणको गति देखेर सन्तोष व्यक्त गरेको कार्यालय प्रमुख मरासिनीले जानकारी दिए । निर्माणका क्रममा स्थानीयस्तरमा उत्पन्न समस्या र समाधानको उपायबारे अध्ययन गर्न र हालसम्मको कामको प्रगति विवरण बुझ्न टोली आएको छ ।